६० बर्षको बृद्ध र क्षिक्षकलेनै छात्रालाइ किन यस्तो हर्कत गरे ? बाटो छेउमै यस्तो अवस्थामा थिए क्षिक्षक (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
६० बर्षको बृद्ध र क्षिक्षकलेनै छात्रालाइ किन यस्तो हर्कत गरे ? बाटो छेउमै यस्तो अवस्थामा थिए क्षिक्षक (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki June 9, 2021
स्थानीय एक युवाले बालिकालाई करणी गर्दै गरेको प्रतक्ष्य भेटेपछि उनलाई समातेपछि अरु तीनजना समातिएको बताइएको छ । पथरीको भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहेकी बालिकाको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको त्यहाँ बालक्लव सञ्चालन गर्ने महिलाले बताएकी छिन । बालिकालाई जबर्जस्तिकरणी गरेको अवस्थामा भेटिएको बताएका छन ।